Fitahiana ‘Tamin’ny Mora sy Sarotra.’—2 Tim. 4:2 | Géorgie: 1998-2006
Sekolin’ny Mpisava Lalana, akaikin’i Zougdidi
GÉORGIE | 1998-2006
NITOMBO be ny isan’ny mpitory sy ny olona liana teto Géorgie, nanomboka tamin’ny 1998. Nisy 32 409, ohatra, no nanatrika Fahatsiarovana tamin’io taona io.
Betsaka anefa ny mpitory sy anti-panahy mbola vaovao, ka tsy ampy traikefa. Nila nampiofanina àry izy ireo mba hahay tsara ny fomba fiasan’ny fandaminana sy ny asa fitoriana. Ahoana no natao?
Nanampy ny fandaminan’i Jehovah
Tamin’ny Martsa 1998 no voatendry teto Géorgie i Arno sy Sonja Tüngler, izay nahazo diplaoma tamin’ny Sekoly Fanitarana An’i Gileada tany Alemaina. Neken’ny Filan-kevi-pitantanana koa hoe hasiana biraon’ny Komitin’ny Tany teto, tamin’io taona io. Ny sampan’i Rosia no niandraikitra azy io.
Nanomboka nanara-maso ny asa fitoriana teto ilay komity. Nohafarana mivantana avy tany amin’ny sampan’i Alemaina (sampan’i Eoropa Afovoany ankehitriny) ny boky sy gazety, rehefa nekena ho ara-dalàna ny asantsika. Azo natao koa ny nividy tany hanorenana Efitrano Fanjakana sy tranon’ny sampana.
Betsaka no tsy afaka nitory isan-trano nandritra ny fitondrana sovietika, satria voarara an-taonany maro ny asa. Hoy i Arno Tüngler: “Nitory teny an-dalana foana ny ankamaroan’ny mpitory. Vitsy ihany no zatra nitory isan-trano sy nitsidika an’ireo liana.”
Arno sy Sonja Tüngler
Hoy i Davit Devidze, izay nanomboka nanompo tao amin’ilay biraon’ny Komitin’ny Tany, tamin’ny Mey 1999: “Be dia be ny asa teny amin’ny saha sy tato amin’ny Betela. Nisy zavatra efa novakinay tao amin’ny bokintsika, fa tsy azonay an-tsaina mihitsy hoe ahoana no anaovana azy. Nijery an’izay nataon’ireo rahalahy za-draharaha nirahin’ny Filan-kevi-pitantanana àry izahay, ary nianatra avy tamin’izy ireo.”
Nanomboka nahazo fampiofanana be dia be ireo rahalahy teto. Nandray soa koa anefa ireo mpampiofana. Niana-javatra be avy tamin’ireo mpiara-manompo teto an-toerana ireny vahiny ireny. Mahatsapa an’izany daholo izay manitatra faritany.—Ohab. 27:17.
Mahatehotia ny Vavolombelona eto
Nitantara i Arno sy Sonja fa noraisina tsara izy mivady rehefa tonga teto. Nataon’ireo rahalahy sy anabavy koa izay hahatamana azy ireo.
Nilaza i Sonja fa nalala-tanana ny mpiara-manompo. Hoy izy: “Nanatitra sakafo matsiro ho anay foana ilay mpivady teo akaikinay. Nisy rahavavy iray koa nitondra anay nanompo, sy nampifankahalala anay tamin’ilay fiangonanay vaovao. Nampahafantatra anay ny kolontsaina teto koa izy. Nisy rahavavy iray hafa indray nampianatra anay teny géorgien.”
Voatendry teto koa i Warren sy Leslie Shewfelt avy any Kanada, tamin’ny 1999. Hoy izy mivady momba an’ireo rahalahy sy anabavy teto: “Lasa tsy foinay ry zareo sady modely ho anay satria be fitiavana. Mifankatia izy ireo na kely na lehibe, ary tsy misalasala maneho ny fihetseham-pony.”
Vavolombelona teto an-toerana niara-nanompo tamin’ny misionera za-draharaha tao amin’ny biraon’ny Komitin’ny Tany
Ny toetra tsaran’ny tompon-tany no nifantohan’ireo voatendry hanompo teto Géorgie, fa tsy ny olana hitany. Lasa tsy foin’ny rahalahy teto koa ireo misionera, satria manetry tena sady be fitiavana.
Nanaiky ny fahamarinana ireo matahotra an’Andriamanitra
Nihamaro ny olona tso-po nanaiky ny fahamarinana nanomboka tamin’ny 1991 ka hatramin’ny 2000. Nisy 1 724, ohatra, no natao batisa tamin’ny 1998. Nahoana no betsaka hoatr’izany ny olona liana?
Hoy i Tamazi Biblaia, izay mpiandraikitra mpitety faritany nandritra ny taona maro: “Efa hatramin’izay no nampianarina ho tia an’Andriamanitra ny mponina eto, ka mora amin-dry zareo ny manaiky ny hafatra torinay.”
Hoy koa i Davit Samkharadze, mpampianatra amin’ny Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana: “Matetika no sakantsakanan’ny havany sy ny mpiara-monina ny olona iray, rehefa manomboka mianatra Baiboly. Maro amin’ireny mpanohitra ireny anefa no lasa mianatra Baiboly!”
Niely be ny hafatra momba ilay Fanjakana ka maro no nanova ny fiainany. Nahatratra 36 669 ny mpanatrika ny Fahatsiarovana tamin’ny Aprily 1999. Tampon’isa vaovao izany!
“Maro ny mpanohitra”
Hoy ny apostoly Paoly momba ny fitoriana nataony tany Efesosy: “Misy varavarana lehibe nosokafana ho ahy, dia varavarana misokatra ho amin’ny asa. Maro anefa ny mpanohitra.” (1 Kor. 16:9) Izany no nanjo an’ireo Vavolombelona teto Géorgie, volana vitsivitsy taorian’ilay Fahatsiarovana nanan-tantara tamin’ny 1999.
Namory vahoaka teto Tbilissi i Vasili Mkalavishvili, izay pretra efa niongana, sy ny olon-kafa anisan’ny fikambanana ortodoksa mahery fihetsika, tamin’ny Aogositra 1999. Nodoran’izy ireo ampahibemaso ny bokintsika. Nenjehina mafy nandritra ny efa-taona ny Vavolombelona taorian’izay.
Notoherina ny Vavolombelona teto, nodorana ny bokiny, ary notafihina izy ireo, nanomboka tamin’ny 1999
Tonga nanakorontana ny fivorian’ny fiangonana tao Gldani, teto Tbilissi, ny mpivavaka vitsivitsy mahery fihetsika sy ny olona 200 teo ho eo, tamin’ny 17 Oktobra 1999. Novelezin’izy ireo tamin’ny kibay sy lakroa vy ny mpanatrika, ka maromaro no naiditra hopitaly.
Indrisy anefa fa tsy nosamborina ireo mpanakorontana, ka nitohy ny fanafihana ny Vavolombelona. Nanameloka an’ireny herisetra ireny ny manam-pahefana maro, anisan’izany ny Filoha Chevardnadze, saingy tsy nisy fepetra noraisina. Matetika aza ny polisy no ela be taorian’ny fanafihana vao tonga.
Nanomboka nanely lainga momba ny Vavolombelona koa i Gouram Charadze, mpikambana tao amin’ny Parlemanta teto Géorgie. Mampidi-doza, hono, izy ireo. Hoatran’ny hoe vita hatreo àry ny fitoriana tamin-kalalahana.
Tsy nijery fotsiny ny fandaminan’i Jehovah
Tonga dia nanampy an’ireo Vavolombelona teto ny fandaminana. Natoro azy ireo izay tokony hatao rehefa misy manafika. Nampahatsiahivina azy ireo koa hoe nahoana ny tena Kristianina no enjehina indraindray.—2 Tim. 3:12.
Nampakatra ny raharaha tany amin’ny fitsarana ny fandaminana mba hiarovana an’ireo rahalahintsika. Hoy ny rahalahy iray tao amin’ny Sampan-draharaha Momba ny Lalàna ao amin’ny sampan’i Géorgie: “Nametraka fitarainana 800 mahery izahay nandritra ny efa-taona, noho ny nafitsok’i Vasili Mkalavishvili sy ny namany. Niangavianay ireo manam-pahefana sy fikambanana mpiaro ny zon’olombelona mba hanampy anay. Nanaitra ny sain’ny besinimaro momba an’izay nanjo an’ireo rahalahintsika koa ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah. Mbola nitohy ihany anefa ny fanafihana!” *
^ feh. 30 Niady tany amin’ny fitsarana isika mba hiarovana ny zontsika. Manazava bebe kokoa momba izany ny Mifohaza! 8 Febroary 2002, pejy 18-24.
1998-2006: Nahazo Fitahiana ‘na Tamin’ny Mora na Tamin’ny Sarotra.’—2 Tim. 4:2.